Ny vahaolana hifehezana ny fiovana amin'ny fizarana fanodinana rivotra sy rano
Dongguan Enuo bobongolo Co., Ltd dia sampan'ny Hong Kong BHD Group, ny famolavolana lasitra plastika ary ny famokarana no orinasan-dry zareo. Ankoatr'izay, ny ampahany amin'ny metaly cnc machining, ny vokatra prototype R&D, ny fitaovana fanaraha-maso / ny fanamafisana R&D, ny famolavolana vokatra plastika, ny famafazana ary ny fivondronana.
famoronana 5 hevitra Sep-28-2020
Ry mpamaky malala, niresaka momba ny fizarana famolavolana izahay mba hifehezana ny lasitra alohan'ny fanovana amin'ny lahatsoratra farany (Ahoana ny fomba hifehezana ny fiovan'ny ampahany amin'ny fantson-drivotra sy rano? -Fizarana drafitra), fa ny hanana endrika tsara dia ny toerana misy azy io, mila ataontsika koa asa fanovana be dia be mba hanitsiana ny refy arakaraka ny valin'ny fitsapana bobongolo tena izy. Araka ny fantatrao, ny faritra samihafa dia manana geometry samihafa, noho izany dia tokony hifanaraka amin'ny vahaolana samihafa ny satan'ny famolavolana hafa. ok, azafady mba araho aho hahafantatra izay vahaolana hihetsika.
Amin'ny ankapobeny, matetika isika dia mila fisedrana bobongolo in-4 hanomanana ny lasitra ho an'ny fividianana entana, ary ny fitsapana rehetra dia manana ny anjara birikiny amin'ny fanomezana ny lasitra feno.
Ny t0 andrana dia ny ekipa ataontsika anaty mba hijerena ny fiasan'ny bobongolo, ary hamarinina ny valin'ny fiovana efa novolavolainay na noforoninay dia marina na tsia.
Fahazoana ny angon-drakitra misy ny tena fiovana (Base end ambonin'ny, fantsona orifice, fantsom-pifandraisana, fivarotana buckle…)
Miezaha mitady ny olana rehetra amin'ny bobongolo, tsy maninona na miafina, ohatra: ny fanokafana / ny fanidiana ny bobongolo, ny famoahana ny famoahana ny bobongolo, ny lanjan'ny fifandanjana ara-nofo, ny fipetrahan'ny fe-potoana famolavolana, ny fefy ary hiaka fohy sns.
Mijanona santionany amin'ny mari-pana 24h ara-dalàna miaraka amina toerana malalaka, avy eo mandrefy ny refy (ny refy momba ny refy ao anatiny ihany), indrindra ny manamarina ny faritry ny tongotra, toy ny fahamendrehana, fisaka, haavon'ny tongotra ary hateviny. Satria ny faritra tongotra dia toy ny daty fandrefesana foana. Raha vantany vao misy ny tatitra momba ny refy T0, dia ovao ny bobongolo mifanaraka amin'izany amin'ny alàlan'ny welding.
Momba ny fanovana refy aorian'ny T0, tsy miraharaha afa-tsy ny fisaka, ny mahitsy ary ny fahamendrehana.
Ho an'ny fanandramana T1, matetika ny mpanjifa dia hanatevin-daharana anay amin'ny fisedrana bobongolo.ary tokony ho tsapantsika eto ambany ny tanjona avy amin'ny T1.
Tokony ho OK ny fiasan'ny bobongolo sy ny hetsika, ary ny fizotran'ny tsindrona dia tokony hatao amin'ny toerana milamina.
Ny refy santionany dia tokony ho ok amin'ny fahamendrehana amin'ny faritra tongotra, fisaka ary fahamendrehana.
24 ora aty aoriana, ny fandrefesana ireo santionany (ny tatitra momba ny refy feno dia halefa any amin'ny mpanjifa) ary arakaraka ny valiny no hampihetsika ny fanovana ny bobongolo.
Manolo ny vy malefaka amin'ny sisiny fototra amin'ny vy mafy ilaina. Mandritra izany fotoana izany dia zahao ny fitaovana sy ny fenitra fizarana hanomanana ny lisitra.
Manao fanitsiana kely momba ny fahamendrehana, ny fisaka ary ny fahamendrehana.
Manatsara ny fandeferana amin'ny toerana rehetra.
Ny tanjon'ny andrana T2 dia:
95% ny refin'ny toeran'ny fantsom-panafody, brekts ary clip amin'ny fandeferana. Mba handrefesana ireo santionany ary hizaha raha misy ny refin'ny NG mijanona.
Ny mahitsy 100%, ny fisaka ary ny maharitra dia ao amin'ny fandeferana.
Ny tsy fitoviana rehetra eo amin'ny inserts dia ao anatin'ny 0.1mm.
Ny santionany T2 dia tokony halefa amin'ny mpanjifa ho an'ny fizahana fiasa sy fivoriambe, fifandraisana amin'ny mpanjifa raha misy hevitra avy amin'ny fitsapana. Raha tsy misy fanovana injeniera dia hanova ny lasitra ho toy ny fandaharam-potoana isika.
Manatsara ny refy rehetra.
T3 andrana ny bobongolo dia tokony ho feno tanteraka ny refy sy ny santionany olana.
Ny fanandramana fankatoavana ny fitaovana (TA na T4) dia tokony hazakazaka maharitra 2-4 ora hanamarinana ny fiasan'ny bobongolo sy ny kalitaon'ny santionany. Rehefa vita ny andrana dia jereo ihany ny bobongolo alohan'ny fandefasana.
Etsy ambony dia ny famintinana ny fanovana ny lasitra alohan'ny fanovana. fampahalalana amin'ny antsipiriany azafady mba mifandraisa aminay harry@enuomold.com
Misaotra ny fotoananao!
- Lahatsoratra teo aloha
Tsy mieritreritra ve ianao fa tsara tarehy kokoa amin'ny zazavavy kely eo amin'ny toeram-piasana
Firy no fantatrao momba ny kilema famolavolana ampahany
Iza amin'ny sary no hofidinao amin'ny faran'ity zavakanto ity
Salama namana, jereo ny fitsaran'ny Amerikanina ny haavon'ny lasitra misy anao!
Ahoana ny fomba hifehezana ny fihenan'ny ampahany amin'ny tanky rivotra sy rano? -Fizarana endrika
Ny bobongolo boaty sakafo mangarahara dia nalefa tany amin'ny mpanjifa
Inona no atao hoe fitsarana momba ny siansa?
Lohataona mafana + ala mifindrafindra ala!
Lohataona mafana + ala mifindrafindra ala! Salama namana, jereo ny fitsaran'ny Amerikanina ny haavon'ny lasitra misy anao!